‘मास क्याजल्टी' मा भएन संवेदना
दिनेश गौतम मंगलवार, मंसिर १९, २०७४ 1994 पटक पढिएको
कांग्रेस नेता गगन थापाको चुनावी कार्यक्रममा बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका एक कार्यकर्ता। तस्बिर: सुनिता डंगोल
‘माछा बजार जस्तो आकस्मिक कक्ष...
काठमाडौं: पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासहित दर्जन घाइते आकस्मिक कक्षमा पुगेको सूचना पाउनेबित्तिकै उपचार गर्न हिँडेका शिक्षण अस्पताल आकस्मिक विभागका प्रमुख प्राडा प्रतापनारायण प्रसादलाई आकस्मिक कक्षको गेटभित्र पस्न हम्मे–हम्मे पर्‍यो।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा दीपक महरासँगै गएका प्रसादले आफ्नो परिचय दिँदै भीड छिचोलेर भित्र छिरे पनि घाइतेसम्म पुग्न ठेलमठेल गर्नुपर्‍यो।
‘कार्यकर्ताको यति भीड थियो कि को घाइते हो, को बिरामी र कार्यकर्ता हुन् छुट्याउनै कठिन भयो,' प्राडा प्रसादले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस्तो मास क्याजल्टीमा भीड गर्नुहुँदैन । पहिला घाइतेको उपचारलाई प्राथमिकता दिने हो । त्यसपछि बल्ल कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले भेट्ने हो ।'
डाक्टर भित्र जान नपाएको र आकस्मिक कक्षमा रहेका अन्य बिरामी बाहिर निस्कन नपाएको स्थिति थियो । भीड थाम्न नसकेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समेत बोलाउनुपरेको अस्पतालका सुरक्षा गार्ड प्रमुख मोहनचन्द्र रेग्मीले बताए ।
अस्पताल परिसरमा डीएसपीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए । भीडको अवस्थालाई हेरेर गगनका शुभेच्छुकले हाते साङ्लो बनाएका थिए ।
कांग्रेस नेता गगन र घाइतेलाई भेट्न आएका शुभेच्छुक कार्यकर्ता अस्पताल परिसर मात्र होइन, आकस्मिक कक्षमा पनि छिरे । सञ्चारकर्मीको ओइरो पनि आकस्मिक कक्षमा छिर्न आतुर देखिन्थ्यो ।
अस्पतालको आकस्मिक कक्षका सुरक्षा गार्ड प्रमुख मोहनचन्द्रलाई तनाव भयो । भित्र जान नपाएको निहुँमा भीडमा रहेका एक व्यक्तिले गार्डलाई हान्न हेल्मेट उठाएका थिए । रेग्मी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा जाने÷बुझेका जस्ता देखिने शिक्षितले अटेर गर्दा दुःख लाग्छ ।'
त्यस्तै, अर्का व्यक्तिले आफू आकस्मिक कक्षमा छिरेपछि बाहिर रहेकी पत्नीलाई भित्र आऊ भन्दै ताने । ‘यस्तो अवस्थामा धैर्य गर्नुपर्छ । डा. प्रसादले भने, ‘सेवा गर्ने बेलामा भीड नगरिदिन म अनुरोध गर्छु । आकस्मिक कक्षमा त झन् जाँदै नजानुस् । भीडका कारण डाक्टरले समयमै हेर्न र उपचार गर्न पाउँदैन ।'
आकस्मिक कक्षमा बम विस्फोटका १२ जना घाइतेको उपचार हुँदै थियो । एप्रोन लगाएर उपचारमा जुटेका डा. प्रसादलाई समेत केही व्यक्तिले धेकेले । ‘डाक्टरलाई समेत धकेल्ने गरी आकस्मिक कक्षमा भीड लाग्नु उचित होइन,' उनले भने, ‘यस्ता घटनामा सञ्चारकर्मी, शुभेच्छुक, कार्यकर्ता सबैले बुझ्नु जरुरी छ । मास क्याजल्टीमा भरसक आफन्तसमेत आकस्मिक कक्षमा जानु हुँदैन । उपचार गर्दा अवरोध गर्नु हुँदैन ।'
शनिवार, पुस १, २०७४ एघार हजार बालबालिका कुपोषणको शिकार
सोमवार, मंसिर ४, २०७४ किन हुन्छ जवानीमै मुटुरोग ?
नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गिरोह पक्राउ 775
मार्न तयार पारिएका रुखलाई यसरी बचाइयो (फोटोकथा) 3774
सिडिओ र एलडिओको मिलेमतोमा गिटी, बालुवा तस्करी 892
१२ बर्षीया बालिकालाई सामूहिक बलात्कार 8182